Waa’ee Manneen Murtii Oromiyaa | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Manneen Murtii Oromiyaa, yeroo mootummaa cehumsaa jechuunis bara 1985 keessa Labsii Lakk. 3/1985’n kan hundaa’an ta’uu seenaan ni agarsiisa. Yeroon mootummaa cehuumsaa kun hanga bara 1987 tti kan itti fufe yoo ta’ee, sana booda sirna federaalawaa Heera Mootummaa bara 1987 keessa labsamee baheen bakka bu’uu danda’eera.
Hojiirra oolmaa heerichaa hordofee mootummaaleen aangoo heerichaan adda bahee qoodameef qaban sadarkaa lamatti, jechuunis sadarkaa federaalaa fi sadarkaa naannoleetti, akka hundaa’an taasifamee jira. Mootummaaleen sadarkaa lamatti hundaa’an kunniin sadarkaa isaanitti aangoo seera baasuu, seera raawwachiisuu fi seera hiikuu heerichaan qoodamee kennameef kan qabanii dha.
Manneen Murtii gama ilaaluun heericha keewwata 78 (3) jalatti akka tumametti Naannoleen Mana Murtii Waliigalaa, Mana Murtii Ol’aanaa fi Mana Murtii Aanaa hundeessuu qabu. Heerri Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 1987 bahes kanuma bu’uureffachuun Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa, Manneen Murtii Ol’aanaa fi Manneen Murtii Aanaalee kan hundaa’an ta’uu tumeera.
Gurmaa’insa, aangoo fi gahee hojii Manneen Murtii sadarkaan jiran seeraan murteessuuf jecha labsiileen adda addaa bara 1988 irraa eegalee bahaa fi inni tokko isa kan biraa fooyyessaa, Manneen Murtii Naannichaas caalmaatti bu’a-qabeessa taasisaa Labsii Lakk. 216/2011 irra gaheera. Labsichi “Labsii Gurmaa’insa, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Oromiyaa Irra Deebiin Murteessuuf Bahe Labsii Lakk. 216/2011” jedhamee kan waamamuudha. Labsii kanaan aangoon Manneen Murtii Naannichaa sadarkaa sadanirra jiranii ifatti erga bahee tumamuun gamatti ergama isaaniis yeroo jalqabaaf adda baasee kaa’eera.
Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaa fi kan Naannoo Oromiyaatiin naannooleef kennamanii fi Naannicha keessatti raawwataman irratti aangoo abbaa seerummaa dhumaa fi isa ol’aanaa kan qabu yoo ta’u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqisiisaa ta’e kennuuf aangeffameera. Dabalataanis dhimmoota federaaalaa aangoo Mana Murtii Ol’aanaa Federaalaa jalatti kufan irratti aangoo bakka bu’iinsaa ni qabaata.
Manni Murtichaa yeroo ammaa kana dhaddacha giddugaleessaa Finfinnee naannoo Calcallii/Saarbeet (yeroof) jedhamutti argamuun dabalatatti dhaddachaalee Dhaabbii Oromiyaa Kibbaa Magaalaa Shaashamannee, kan Oromiyaa Bahaa Magaalaa Adaamaa fi kan Oromiyaa Lixaa Magaalaa Naqamteetti argamuun uummata naannichaa itti dhiheenyaan tajaajiluu irratti kan argamuu dha. Manni Murtichaa Magaalaa Finfinnee, naannoo Caffee Araaraa (6 Kiiloo) tti gamoo ammayyaa’aa abbaa 2B+G+13 ta’e akkaataa seenaa fi duudhaa Oromoo calaqqisiisuun ijaarsisaa jira.
Manneen Murtii Ol’aanaa 22 ta’an godinaalee 21 fi Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa keessatti hundaa’anii tajaajila kennaa jiru. Aangoon abbaa seerummaa isaanis dhimmoota Naannoo irratti qabeenya socho’u tilmaamni isaa 1,000,000 olii fi qabeenya hin sochoone irratti qarshii 3,000,000 ol himata kallattiin ykn aangoo sadarkaa duraatiin ilaalanii akka murteessan akkasumas dhimmoota Manneen Murtii Aanaatti murtii dhumaa argatan irratti aangoo oliyyannoo ni qabaatu. Gama biraatiin dhimma federaalaa aangoo Mana Murtii Sadarkaa Jalqabaa Federaalaa jalatti kufan bakka bu’iinsaan ilaaluuf aangeffamaniiru.
Manneen Murtii Aanaa ilaalchisee yeroo ammaa kana Manneen Murtii 307 ta’an Aanaalee fi Magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti hundaa’anii dhimmoota Naannoo aangoo Manneen Murtii Ol’aanaa gadi ta’an irratti aangoo sadarkaa jalqabaatiin ilaalanii murteessuun tajaajila kennaa jiru.
Sochii galmee fi raawwii isaa gama ilaaluun bara 2013 keessa baay’ina dhimmootaa Manneen Murtii Oromiyaatti dhiyaatanii keessummeeffaman ilaalchisee Mana Murtii Waliigalaatti dhimmootni 2,211bara 2012 irraa kan cehan, dhimmootni 24,881 haaraa kan banaman yoo ta’u walumatti dhimmootni 27,092 ta’an ilaalamaa turan kana keessaa 23,793 (87.82%) kan ta’an murtii argataniiru. Sadarkaa Manneen Murtii Ol’aanaa 22tti dhimmootni 5,990 ta’an bara 2012 irraa kan cehan, dhimmootni 62,085 haaraa kan banamanii fi walumatti dhimmootni 68,075 ta’an dhiyaatanii dhimmoota 63,845 (93.79%) ta’an irratti murtiin kennameera. Sadarkaa Manneen Murtii Aanaaleetti dhimmootni 35,026 bara 2012 irraa kan cehan, dhimmootni 531,853 haaraa kan banamanii fi walumatti dhimmootni 566,895 ta’an ilaalamaa turanii dhimmoota 539,191 (95.12%) ta’an irratti murtiin kennameera. Walumaagalatti bara 2013 Manneen Murtii Oromiyaatti dhimmootni 43,227 bara 2012 irraa kan cehan, dhimmootni 618,819 ta’an haaraa kan banamanii fi walumatti dhimmootni 662,046 ta’an ilaalamaa turanii dhimmoota 626,829 (94.68%) ta’an irratti murtiin yoo kennamu kanneen hafan bara kanatti cehaniiru.
Walumaagalatti Manneen Murtii Oromiyaa tajaajila abbaa seerummaa gama hundaan bu’a qabeessa ta’e kennaa jiru; yeroo yerootti of fooyyessuufis rifoormii hunda-galeessa ta’e gaggeessaa jira.